सरकारबाट नीतिगत स्पष्टता होस्, नीजि क्षेत्रबाटै आर्थिक समृद्धि सम्भव छ (व्यवसायी अन्जन श्रेष्ठको बिचार) — Arthatantra.com
Arthatantra.com > Headline > सरकारबाट नीतिगत स्पष्टता होस्, नीजि क्षेत्रबाटै आर्थिक समृद्धि सम्भव छ (व्यवसायी अन्जन श्रेष्ठको बिचार)
उद्योगी, व्यवसायीहरुले सधैंभरी लगानीको लागि अवसर खोज्ने गर्दछन् । त्यो अवसर दिलाउने काम सरकारको हो । यसमा सरकारले सहयोग गर्नैपर्छ । उद्योगी व्यवसायी सँधै नै सरकारसँग लगानीको लागि अवसरको साथै नीतिगत स्पष्टता र त्यसको निरन्तरता होस भन्ने चाहेका हुन्छन् । यो सबैलाई आवश्यक पर्ने गर्दछ ।
देशमा आर्थिक विकास गर्ने हो भने, समृद्धि ल्याउने हो भने, गरिबी न्यूनिकरण गर्ने हो भने, आन्तरिक रोजगारी बढाउने, लगानीको वाताबरण बनाउने हो भने नेपालको भू-राजनीतिक अवस्थाले हेरेर सरकारले उद्योगीहरुलाई प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । भौगोलिक रुपमा हाम्रो देश नेपाल सानो छ । यहाँ उत्पादन न्यून छ । हामीले धेरै सामान आयात गर्ने गरेका छौं । तर यहाँ गर्ने हो भने धेरै नै सम्भावना छ । त्यसमा सरोकारवाला पक्षको ध्यान किन गएन ? प्रश्न यहाँ छ ।
सरकारले उद्योगी, व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने, प्रतिस्पर्धामा जानको लागि कसरी हुन्छ क्षमता बढाउने तर्फ सोच्न आवश्यक छ । त्यसको लागि उपयुक्त समय पनि यही नै हो । कोरोनाको कारण नेपाल मात्रै नभएर विश्व नै अस्तव्यवस्त बनेको छ । जसको असर नेपालमा पनि परेको छ । यो बेलामा सरकारले उद्योग, व्यवसायलाई संरक्षण गर्नु पर्यो भन्ने उद्योगी, व्यवसायीहरुको माग रहेको छ र आज व्यवसायीहरुको माग पनि यही नै हो । चाँडो भन्दा चाँडो सरकारको नेपालमा भएका उद्योगलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भन्नेमा ध्यान जानु पर्यो ।
नेपालमा घरेलु तथा साना उद्योगले राजस्व तथा रोजगारीमा धेरै नै योगदान दिएका छन् । कोरोनाका कारण घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायबाट कर्मचारी बेरोजगार हुनु परेको, कतिपय उद्योग नै बन्द भएका छन् । यो अवस्थामा साना तथा मझौला व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने मैले देखेको छु ।
सरकारले पनि साना तथा मझौला उद्योगमा धेरै नै ध्यान दिन आवश्यक छ । मसलन्द तथा शैक्षिक सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगी साना तथा मझौला व्यवसायी हुन् । कोरोनाका कारण उहाँहरुलाई धेरै समस्या भएको छ ।
सरकारले साना तथा मझौला उद्योगलाई राहत दिने त भन्यो । तर त्यसको लागि बनेको निर्देशिकाले गर्दा समस्या भएको छ । निर्देशिकाकै कारण कयांैले राहत पाउन सकेनन् । सरकारले पुर्नकर्जाको सुविधा पनि पाउन सकेनन् । त्यस विषयमा पनि सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ ।
उद्योग वाणिज्य महासंघमा आएको नयाँ नेतृत्वले भिजन पत्र तयार पारिरहेका छौं । महासंघको कार्यसमितिको बैठकमा त्यसको पहिलो चरणको छलफल भएको छ । हामी सबै व्यवसायी, वस्तूगत संघ, जिल्ला संघ, नगर संघ लगायत सबैमा भिजन पत्रको विषयमा छलफल गर्ने तयारीमा छौं । त्यसमा साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई कसरी-कसरी अघि लैजाने भन्नेमा पनि केन्द्रित रहेछ छलफल हुनेछ ।
यसको उद्देश्य भनेको भनेको कसरी दोहोरो अंकमा आर्थिक वृद्धि गर्न सकिन्छ ? श्रम बजारमा ५ लाख मजदुरलाई कसरी ल्याउन वा रोजगारी दिन सकिन्छ भन्ने नै हो । त्यो विषयमा हाम्रो बढी चासो रहेको छ । त्यसको लागि सबैले हामीलाई उचित, रचनात्मक सुझाव दिनुहोला । हामी सबै क्षेत्रमा सूझाव लिन आउने नै छौं ।
नेपाललाई सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरण गरी नयाँ दिशामा लैजानको लागि वा आर्थिक समृद्धिको लागि हामीले जुन प्रयास गरेका छौं, त्यसमा सबै उद्योगी व्यवसायीको साथ हुने नै छ ।
साना तथा मझौला उद्योगीले समयमा नै ऋण पाएनन्, ऋण लिन समस्या भयो भनेर महासंघले बैंकर्ससँग सम्झौता गरेको छ । जसमा हामीले साना मझौला व्यवसायीलाई ऋण दिन भएको समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर सम्झौता गरेका छौं । हामीलाई के आशा छ भने त्यो सम्झौताले भोलीको दिनमा साना, मझौला ऋणीलाई ऋण दिने व्यवस्थामा सुधार हुने नै छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउको लागि सबै अवरोध चिर्न जरुरी छ । राजनीतिक स्थायित्व बिना आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ ।
(लक्ष्मी ग्रुपका कार्यकरी निर्देशक तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, वस्तुगततर्फका उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले नेपाल मसलन्द तथा शैक्षिक सामाग्री उद्योग संघको २१ औं बार्षिक साधारणसभामा दिएको मन्तव्य)
२०७७ फागुुण १७ गते १३:२८ मा प्रकाशित
नगरपालिका आफैँले घाट चलाउने
विपद् प्रतिकार्य योजना तयार
‘महिलासँगको उपप्रमुख’ कार्यक्रम प्रभावकारी